17 / 07 / 2021 17 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 305 Views စာ0မှတ်ချက် ဘာမင်ဂမ်, Bristol က, City, DOTS, Edinburgh, အဖြစ်အပျက်, ဖြစ်ရပ်များ, Friends, Lego, Lego CIty, Lego DOTS, Lego ဖြစ်ရပ်, Lego Friends, Lego စတိုးဘာမင်ဂမ်, Lego စတိုး Bristol က, Lego စတိုး Edinburgh, Lego စတိုးလီဗာပူးလ်, Lego စတိုးဆောက်သမ်တန်, Lego Vidiyo, ဆောက်သမ်တန်, ခရီးစဉ်, ဗီဒီယို
အသစ် Lego ပွဲကိုယူဆောင်လာမယ့်ယူကေမှာသွားမယ်လို့ကြေငြာလိုက်ပါတယ် CITY, VIDIYO, DOTS နှင့် Friends- လှုပ်ရှားမှုများလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Lego Pop & Play ခရီးစဉ်သည် start လေးခုအပေါ်အခြေခံပြီးမိနစ် 30 အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဒေသတွင်းဖြတ်ပြီးစျေးဝယ်စင်တာများမှဗြိတိန်နိုင်ငံခရီး Lego အကြောင်းအရာများ - စိတ် ၀ င်စားသောမိသားစုများမှအခမဲ့။
အပေါ်တိကျတဲ့စာရင်းလှုပ်ရှားမှုများ အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ မယားစကားအလှဆင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖျော်ဖြေပွဲများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Friends-themed scavenger အမဲလိုက်ခြင်း။ The Lego အုပ်စုသည်အခြားသူများနှင့်နောက်ဆုံး၌သူတို့၏ scavenger အမဲလိုက်ခြင်းကိုနှစ်သက်နေပုံရသည် မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သည် နယူးယောက်ရှိ Rockefeller စင်တာတွင်။
အဆိုပါ Lego Pop & Play Tour သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းစုစုပေါင်းစျေးဝယ်စင်တာငါးခုသို့လည်ပတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်နေ့စဉ်လူအုပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်စနစ်တစ်ခုရှိသည်။ လတ်တလောတွင်လက်မှတ်များအားလုံးကိုရောင်းလိုက်ပြီးနောက်အပတ်များတွင်ပိုမိုရောင်းချနိုင်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမဆိုစောင့်ကြည့်ပါ။ ဤတွင်ခရီးစဉ်ကိုလက်ခံမည့်နေရာများစာရင်းအပြည့်အစုံသည်ဒီမှာ၏တည်နေရာနှင့်အတူတူဖြစ်သည် Lego စတိုး.
ဆောက်သမ်တန် Bargate - သြဂုတ်လ 7-8
လီဗာပူးလ်အသင်း၏ - သြဂုတ်လ 14-15
Edinburgh စိန့်ဂျိမ်း Quart။ er - သြဂုတ် ၂၈-၂၉ \_ t
ဘာမင်ဂမ် Bullring - စက်တင်ဘာလ 4-5
Bristol က Cabot ဆပ်ကပ် - စက်တင်ဘာ 11-12
Lego VIDIYO အဆိုပါထံမှအချို့သော ဦး စားပေးကုသမှုရတဲ့ခံရဖို့ပုံရသည် Lego ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောအခြားကမ္ဘာအနှံ့ခရီးစဉ်ကိုယခုအချိန်တွင်အုပ်စုလိုက်လုပ်ပါ ဒီမှာ.
← ထပ်မံအနားယူသော LEGO အစုံခုနစ်ခုသည် VIP နှစ်ဆကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်
LEGO ၏ NINJAGO vlog နည်းပညာသည်အဘယ်မှာပေါ်လာနိုင်မည်နည်း။ →